Ny shapewear dia manolotra fanaintainana eo noho eo amin'ny fotoana fohy ve ianao efa nifoka tamin'ny kibonao taloha sy tsy maintsy nitazona azy? Eny, ny formewear dia afaka manome izany fihenan-tsasatra tampoka izany nefa tsy mila manahirana amin'ny minono amin'ny vavoninao. Ny antony dia ny maka endrika ny vatana ny "formewear"
Shapewear ankehitriny dia fiantsoana lavitra be avy amin'ny akanjo nitaovan'ny reninay. Izy ireo dia mitafy sy ankalazain'ny maro kintana sy celebs ary voafaritra tsara ho an'ny isaky ny kabine.Inona? Fa maninona no mitafy bikao? Jereo Overrall: na fety io na akanjo na orinasa, afaka manao trans ...
Raha tsy te-voafetra ianao rehefa mampiasa bras mahazatra, dia voafetra ny fitafianao, mivoaka avy any ambony ny tadiny ary na dia nodidiana mafy aza izy ireo, dia tsapanao foana izy ireo fa mianjera na mifindra amin'ny toerana iray. Ary ny fehin-kibo tady na underwire dia afaka mamela anao hihosina lalina. ...